Madaxweyne Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay Madaxweynihii hore ee dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa gelinkii dambe ee shalay kulan la qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Kulanka oo ka dhacay hoyga Cali Mahdi ayaa waxaa uu ahaa mid salaan iyo is xog-wareysi ku aadan xaaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Arrimaha doorashada 2021.
Sidoo kale Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Madaxweynihii hore ee dalka uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada Maamulkaas iyo arrimo kale oo qorsheysan.
Cali Mahdi ayaa Madaxweyne Cali Guudlaawe uga mahadceliyay booqashadii uu u tegay, iyagoona Cali uu Madaxweynaha uu kula dardaarmay inuu xooga saaro dib u heshiisiinta iyo sidii loo xalin lahaa tabashooyinka jira.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Magaalada Muqdisho, isagoona ka qeyb galay kulamo looga hadlaayay doorashada dalka ka dhaceysa oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada.
Safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka oo geeriyooday